စက်မှုအထက်တန်းမြန်နှုန်းအစာရှောင်ခြင်းအလျှင်အမြန်တံခါးလိမ် China Manufacturer
ဖေါ်ပြချက်:အစာရှောင်ခြင်း Rolling တံခါး,လျင်မြန်သောအမြန်နှုန်းတံခါး,စက်မှုအလိုအလျောက်တံခါး
Home > ထုတ်ကုန်များ > မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းတံခါး > အလူမီနီခရုအမြင့်မြန်နှုန်းတံခါး > စက်မှုအထက်တန်းမြန်နှုန်းအစာရှောင်ခြင်းအလျှင်အမြန်တံခါးလိမ်
ပုဒ်မတံခါးကို overhead အရှိဆုံးကျယ်ပြန့်စက်မှုဇုန်ဝုဏ်အမျိုးအစားအားလုံးကိုအပေါ်တင်ဒေသများအတွက်အသုံးပြုဤဒေါင်လိုက်-ဖွင့်လှစ်အပိုင်းတံခါးများလျှော့ခေါင်းကိုအခန်းတစ်ခန်းနှင့်အတူဒေသများရှိ installed နိုင်ပါတယ်, တစ်ကွေး overhead လမ်းကြောင်းနှင့်အတူဒီဇိုင်း။ သူတို့ကယင်း၏ပေါင်းစပ် panel ကိုဆောက်လုပ်ရေးနှင့်အတူအပူနဲ့အသံ insulator တွင်လည်းသည်။
1. -ကြိတ်စက်-တံခါးကို--ဒီဇိုင်းရေးဆွဲနေကြသည်-နှင့်အတူ-တစ်ဦးချင်းစီစတိုင်, -beautiful-အသွင်အပြင်-and ကြော့-ပုံစံ။
, -could-ရေ-သက်သေပြ, -anti-နေရောင်ခြည်, -anti-သံချေး, -anti-lacerated 2. -Surface က-ကုသ--အမှုန့်-အပေါ်ယံပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
3. -အတူ-တင်းကျပ်-ဖွဲ့စည်းပုံ, -theft-သက်သေပြ, -noise-သက်သေပြ, -warm-စောင့်ရှောက်
4. -all-မျိုး-of စတိုင်-and အရောင်များ--ချိန်ညှိ-to-users`-လိုအပ်ချက်ရှိပါသည်။
အလိုအလျောက်သံမဏိ Spiral မြန်နှုန်းမြင့်တံခါး အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်နယူးဒီဇိုင်းရေးဆွဲ Spiral မြန်နှုန်းတံခါး အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အလိုအလျောက်သံမဏိတာဘိုင်အမြန် Hard တံခါး အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Metal Geomagnetic Hard မြန်နှုန်းမြင့်တာဘိုင်တံခါး အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
စက်ရုံ Rapid Roller Shutter သတ္တုတံခါး အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အစာရှောင်ခြင်း Rolling တံခါး လျင်မြန်သောအမြန်နှုန်းတံခါး စက်မှုအလိုအလျောက်တံခါး အစာရှောင်ခြင်း Rolling Shutter တံခါး အစာရှောင်ခြင်း Turbo တံခါး အစာရှောင်ခြင်း PVC Rolling Shutter တံခါး အစာရှောင်ခြင်း stack တံခါး အစာရှောင်ခြင်း Shutter တံခါး